I-Echo Show 5 (2021) -Ikhamera engcono kunye nesandi kwesi sizukulwana sitsha [UKUHLAZIYA] | Iindaba zeGajethi
Amazon iyaqhubeka nokutyala imali kuluhlu lwayo lwezixhobo ze-Echo, zazo zonke iintlobo, ngeenjongo zedemokhrasi ukufikelela kubancedisi ababonakalayo kunye nekhaya elixhumeneyo kangangoko. Kwiminyaka embalwa edlulileyo sabona ukufika kwe-Echo Show uluhlu njengomoya womoya omtsha kwezi ntlobo zobuchwephesha, kwaye ngoku ihlaziyiwe kancinci.
IAmazon Echo Show 5 (2021) entsha ilapha, isixhobo esinekhamera ephuculweyo, ukusebenza okutsha kunye nophuculo oluncinci kumgangatho wesandi. Fumanisa nathi isithethi esihlaziyiweyo seAmazon esinesikrini esidityanisiweyo kwaye ngakumbi ezona zinto ziphambili kuzo kwaye ukuba kufanelekile ukuthenga.
Kwividiyo ephezulu uya kuba nakho ukubona ifayile ye- ukungagungqi ngokupheleleyo yale nto intsha yeAmazon Echo Show 5 (2021) kunye namanyathelo okuseta alula kunye nokubonakala kwakho kokuqala. Ungasinceda kakhulu ukuba sikhule ukuba ubhalisa kwisitishi sethu seYouTube kwaye usishiyele izinto ezinje. Ibhokisi yezimvo iya kuhlala ifumaneka ukuze usinike imibuzo yakho, siya konwaba ukuyiphendula. Ukuba uyithandile, le Amazon Echo Show 5 (2021) iyafumaneka ngonikezelo olukhawulezileyo kwii-euro ezingama-84,99 kwiwebhusayithi yeAmazon.
1 Izixhobo kunye noyilo: Zimbalwa iinguqu zangaphandle
2 Iimpawu zobugcisa: Iibrashi zokuhlaziya
3 Ikhamera kunye nesandi kunye nophuculo
Izixhobo kunye noyilo: Zimbalwa iinguqu zangaphandle
Esi sizukulwana sesibini seAmazon Echo Show 5 sigcina ukufana okubalulekileyo kubungakanani kunye nohlobo lwangaphambili, ukuqala kuba sinako Iimitha ezili-147 ukuphakama nge-86 yeemilimitha ukuphakama kunye ne-74 yeemilimitha ubunzulu. Zombini i-Echo Show 5 kunye ne-Echo Show 8 ziphakathi kwezixhobo ezimbalwa zeAmazon Echo eziqhubeka nokugcina umlinganiso woxande macala onke. Esi sixhobo sinobunzima obupheleleyo be-410 gram ngenxa yoko asinakukuthatha njengokukhanya. Oku kwiimveliso zomsindo zihlala zihlala kakuhle.
Kwi-bezel ephezulu Kusekho isiciko somatshini wekhamera, iimakrofoni ezimbini, ivolumu ephezulu kunye namaqhosha asezantsi kunye neqhosha elisivumela ukuba sisebenze kwaye singasebenzi ii-microphone kunye nekhamera kusetyenziswa isoftware kuxhomekeke kwiimfuno zethu okanye ukuthanda kwethu.
Ngasemva kushiyeke izibuko lamandla kunye nezibuko le-microUSB esingabazi ngokupheleleyo ubuchule bayo, sicinga ukuba inento yokwenza nenkonzo yobuchwephesha kunawo nawuphi na omnye umcimbi. Inxalenye yayo, umphambili uhlala malunga neesentimitha eziyi-14, oko kukuthi ubude bepaneli yakho 5,5 intshi. Nangona igama linokusenza sicinge ukuba sinee-intshi ezintlanu kuphela, inyani kukuba sinenye into. Textile kwisandisi-lizwi ukutyabeka ngasemva, kwaye njengoko sele kunjalo phantse kulo lonke uluhlu lwe-Echo Ukhetho lwemibala emithathu: Mhlophe, Mnyama, Luhlaza.
Iimpawu zobugcisa: Iibrashi zokuhlaziya
Ukuhambisa isixhobo kwesi sizukulwana sesibini i-Echo Show 5 iya kusebenzisa iprosesa IMediaTek MT 8163, Umanyano phakathi kwenkampani yaseNyakatho Melika kunye nalo mvelisi weeprosesa sele yaziwa, kwaye zichanekile ezo zegama lazo ezenza lonke uluhlu lweemveliso ezikrelekrele zaseAmazon. Asazi, ewe, amandla e-RAM kunye nokugcinwa ukusukela kwi-Echo Show 5 (2021). Inqanaba lokudityaniswa kwe- I-802.11a / b / g / n / ac ye-band ezimbini ze-WiFi akukho ndlela yokwenza.
Lo mboniso we-5 uqhuba uguqulelo oluguquliweyo lwe-Android ngolunye uluhlu lweAmazon Fire, kunye nokusikelwa umda kwemveliso enjalo. Inkqubo ihamba kakuhle ngokwaneleyo ukuze iqhube unxibelelwano oluqhelekileyo ngaphandle kokuphazamiseka. Njengazo zonke iimveliso ze-Echo, sinokuqhagamshela kuyo ngeBluotooth kwaye ngokuqinisekileyo sine-Alexa edityaniswe ngokupheleleyo kwinkqubo. Ewe kunjalo, kule meko asinayo inkqubo yeZigbee, Oko kukuthi, ayinakusetyenziswa njengeziko lokufikelela. Ngokubhekisele kumbane, sinentambo ye-1,5 yeemitha kunye neadaptha ye-15W iyonke. Ixabiso lenyuke kancinci xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili, njengoko ubona kwiAmazon.
Ikhamera kunye nesandi kunye nophuculo
Ikhamera yeAmazon Echo Show entsha evela kwi-2021 ine-2MP sensor, ephinda kabini amandla emveliso kwisizukulwana sayo sokuqala. Kwaye ayikuko nokuba sifumene umahluko ophawuleka kakhulu, ijolise ngakumbi kugqaliso oluzenzekelayo kunye neemeko zokukhanya eziphantsi, apho sifumene khona uphuculo olubonakalayo. Siyaqhubeka sinomatshini "wokugubungela" oya kusivumela ukuba siwufihle umfanekiso wethu nanini na xa sifuna, kunye nokubanakho Sebenzisa iAmazon Echo Show 5 njengekhamera yokujonga, ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zibalaseleyo kubasebenzisi abaninzi.
Isandi sobulumko, le Echo Show 5 Ukunyusa i-millimeter engama-41, okanye i-1,6-intshi isithethi, loluphi ulwazi apho olu hlobo lwemveliso luhlala lunikezelwa. Isandi siphucule kancinci, ngokuhambelana ngqo nesizukulwana sesine i-Echo Two. Ndiyathetha, le Echo Show 5 ngokusisiseko ibandakanya isithethi esifanayo nesine-gen Echo Dot mounts, ngokobungakanani iyafana nakwisizukulwana sesithathu. Ngaphandle kwamathandabuzo sikuluhlu olusisiseko lwezandi zeAmazon, ezoneleyo zezaziso, ezihamba negumbi elincinci elinomculo ngaphandle kokuzenzisa okanye ukudlala umxholo wemultimedia ngokucacileyo kodwa ngaphandle kweemfuno.
Iqaqambisa into yokuba Sinokufikelela kumfanekiso ngexesha lokwenyani ngokusetyenziswa kwe-Alexa ehambelana nazo zombini i-iOS kunye ne-Android, Kwaye sinakho ukufikelela kulo mfanekiso ngokusebenzisa ezinye izixhobo ze-Echo Show, into enomdla kakhulu xa sinabantwana ekhaya. Kwinxalenye yayo, kwisandi kufuneka nditsho ukuba kwimeko ye-Echo Dot, siphantse sanqongophala ngokupheleleyo kwi-bass kwaye isandi sigxile ikakhulu ekuhambiseni umculo okanye ukusebenzisana nomncedisi wenkampani yaseMelika.
IAmazon ikwaqaqambise ukuba ezi zixhobo zisebenzisa i-100% yelaphu elenziwa ngokutsha kunye nezinye iimveliso ezinegalelo kuzinzo lwendalo. Sele ifumaneka ngokupheleleyo kwiwebhusayithi yeAmazon, ke unokuyifumana ukuba uyiNkulumbuso ngokuhambisa ngosuku olunye ngee-euro ezingama-84,99. Ixabiso elithintelweyo kodwa elenza ukuba uzibuze ukuba kufanelekile na ukutsiba kwi-Echo Show 8 enekhamera ye-13MP kunye nesandi se stereo. Ngokuqinisekileyo kukuhambelana okuhle nokuma kwethu ebusuku, ukungabikho komgaqo weZigbee kunokuba nobunzima kakhulu.
Ke ngoko, kucetyiswa njengesibonelelo esinomdla sokujongana nemveliso yenqanaba lokungena, ukuba nje uyacaca ukuba ngokwayo ayililo ikhaya eliqhagamshelekileyo.
Echo Bonisa i-5
Baye bayiphucula ngakumbi ikhamera
Ngomsebenzi "wekhamera yokujonga"
Ulawulo olupheleleyo lwezixhobo ezihambelana ne-Alexa
Isandi asiphuculi kwi-Echo Dot
Intshayelelo inokuba ngcono
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-Echo Show 5 (2021) -Ikhamera engcono kunye nesandi kwesi sizukulwana sitsha [UHLAZIYO]